Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda London oo Gudoomiye iyo Maamul Cusub Dooratay.
Jaaliyadda London oo Gudoomiye iyo Maamul Cusub Dooratay.
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 18/04/2015, ay Jaaliyadda Somalida Ogadenya ee magaaladda London ee wadanka UK ku qabtay doorashadii maamulka labada sanno ee soo socota xilka hayn lahaa. Waxaa cod buuxa iyo kalsooni lagu doortay halgame Yuusuf Jaamac Qabile inuu noqdo Gudoomiyaha Jaalliyadda Somalida Ogadenya ee kudhaqan caasimada wadanka UK ee London. Waxaa kaloo la doortay maamulkii gudoomiyaha la shaqayn lahaa ee jaalliyadda.
Gudoomiyaha cusub halgame Yuusuf oo xubinihii shirka fadhiyey la hadlay ayaa waxaa kamid ahaa qukhbad meelo badan taabanaysa oo madasha shirku kadhacay uu kasoo jeeday sidan; “Waxaan muhiimadda kowaad siin doonaa haduu ilaahay yiraahdo sidii xubnaha jaalliyadda wacyigooda iyo garaadkooda loo kobcin lahaa isla markaana loo xoojin lahaa wax qabadka iyo horumarka guud ee Jaaliyada S.Ogadenya ee London.”
Waxaa kaloo gudoomiyuhu uu ballan qaaday inuu maamulkiisu ku dadaali doono sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka iyo iskaashiga kadhexeeya Maamulka Jaaliyada iyo shacab waynaha Somalida Ogadenya ee kudhaqan guud ahaan wadanka UK gaar ahaan magaalo madaxda London.
Dhanka kale waxaa madasha ay doorashadu kadhacday kusugnaa kaalin wanaagsana kaqaatay Masuuliin kasocota Hogaanka Sare ee Jabhada Wadaniga Xorayna Ogadenya (JWXO).